गुल्मीमा माओवादी केन्द्रले प्रमुख पदमा खाता खोल्यो : धुर्कोटमा भुपाल पोखरेल विजयी ! | ebaglung.com
२०७४ असार १७, शनिबार १६:२१	Top News, थप समाचार 311 पटक हेरिएको !
प्रेम सुनार, गुल्मी, २०७४ असार १७ । गुल्मीमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनका पाँच वटा गाउँपालिका मध्ये एउटा प्रमुख पद पाएको स्थान गुमे पनि अर्को प्रमुख पद पाएको धुर्कोट गाउँपालिकोको प्रमुख पदमा माओवादीले खाता खोलेको छ ।
नेकपा एमालेको दुई तिहाई मत छन भनेर दावि गरिदै आएको धुर्कोटमा एमालेका कृष्ण घिमिरेलाई ३६५ मतको अन्तरले पछाडी पार्दै कांग्रेस माओवादी केन्द्रका संयुक्त उमेदवार भुपाल पोखरेल विजयी भएका हुन् । पोखरेलले ५११६ मत ल्याएर विजयी भएका छन । उनका प्रतिद्धन्द्धी एमालेका घिमिरेले ४७५३ मत ल्याएर पराजित भएका हुन् । त्यस्तै उपप्रमुखमा पनि शिव केसीले ७० मतको अन्तरले विजयी हाँसिल गरेका छन् । केसीले ४८१६ मत ल्याएर विजयी भएका हुन भने एमालेकी रिता थापा ४८४२ मत ल्याएर पराजित भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो चुनाव सम्म कांग्रेस एमाले वा अरु सवै दल एकातिर मिले पनि दुई तिहाई मतले अगाडी हुने एमाले उमेदवार घिमिरेलाई यसपाली भने अपेक्षाकृत मत आउन नसकेको र पोखरेलको गठबन्धनलाई सवै भन्दा बढि मत वस्तुले राखे पछि यति धेरै मतान्तरका साथ पोखरेलको प्यानलले विजयी हाँसिल गरेको बताईएकोछ ।
त्यस्तै संयुक्त उपप्रमुख कांग्रेसका शिव केसी विजयी भएका छन् । गठबन्धनले ७ वटा वडा मध्ये ४ वटा वडा अध्यक्ष सहितको प्यान पनि विजयी गराउन सफल भएको छ । नेकपा एमालेले ३ वटा वडामा मात्रै विजयी हाँसिल गरेको छ । वडा नम्वर १ साविकको नयाँगाउँमा गठवन्धनका कमल थापा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । वडा नम्वर ३ पिपलधारामा नविन जिसी, वडा नम्वर ४ जैसीथोकमा मानबहादुर कुँवर र वडा नम्वर ५ वस्तुमा ढुण्डीराज भण्डारी वडाध्यक्षमा विजयी भएका हुन् । त्यस्तै नेकपा एमालेका उमेदवार विष्णु श्रीसले वडा नम्वर ३ हाहाडेमा अध्यक्ष पदमा विजयी हाँसिल गरेकाछन् । वडा नम्वर ६ धुर्कोट रजस्थलमा कृष्ण नेपाली र वडा नम्वर ७ वाग्लामा हिमप्रसाद पन्थी एमालेको तर्फबाट वडाध्यक्ष सहितको प्यानल विजयी भएको छन् । कांग्रेस माओवादी गठवन्धन मध्ये रुरुमा एमालेले जितको र छत्रकोटमा अग्रता लिए पनि अन्य दुई गाउँपालिका कालिगण्डकी र सत्यवतीमा गठवन्धनकै अग्रता रहेको छ । तिन प्रमुख दलका एकल उमेदवार लडेको मदानेमा भने सुरुवाती अग्रता लिएको छ ।
स्व लक्ष्मण थापाका पीडित परिवारलाई देश विदेशबाट सहयोग प्राप्त हुने क्रम जारी